Juniper Archives - Frontiir | Frontiir - Benefiting you with world class ICT
Design and Deployment Process
Juniper Firewall In Stock
Click images to view details.
မော်ဒယ်နံပါတ်	 SRX-210 HE2 SRX220H2 SRX650
Firewall ကို ဖြစ်ပြီး Network အတွင်းသို့ ၀င်လာသော ကျူးကျော်သူများ၏ data များ Hack ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော IPS ပါဝင်ခြင်း။
Customer များ SSL အသုံးပြုသည့် အခါ data များ၏ အားနည်းချက် ဖြစ်သည်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်၊ သိရှိနိုင်သည့် signature များကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်း။
AppSecure ပါဝင်သည့် အတွက် လိုအပ်သည့် update များကို နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
အသုံးပြုသည့် Application လုံခြုံမှု ရှိ ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
Antivirus ပါဝင်သည့်အတွက် Email ဖြင့် ပါလာသော virus များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Virus ပါသည့် website များ၊ အသုံးမပြုစေချင်သည့် website များကို အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားနိုင်ခြင်း။
Content များ၏ လုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း။
Content များကို Filter လုပ်ထားနိုင်ခြင်း။
No. of 10/100/1000
Mbps port	 2x 10/100/1000
BASE-T 6x 10/100BASE-T
1 x Mini-Physical
( MINI-PIM ) Support for 3G USB 8x 10/100/1000
BASE-T2x USB 2.0
Interface Module ( MINI-PIM )4x 10/100/1000
8 x GPIM or multiple
GPIM and XPIM
Throughput 850 Mps 950 Mpps 7Gbps
PPS 95 Kpps 125 Kpps 850 Kpps
VPN Tunnels 256 512 3000
Per Second 2,200 2,800 35,000
Policies 512 2,048 8,192
Interface Types	 T1/E1, serial,
G.SHDSL T1/E1, serial,
Ethernet SFP T1/E1, serial,
Protocols RIP v1/v2,
OSPFv2/v3, IS-IS, BGP RIP v1/v2,
OSPFv2/v3, IS-IS, BGP
10/100/1000 BASE-T အပေါက် (2)ပေါက် ပါဝင်ကာ 10/100 BASE-T အပေါက် (6)ပေါက်၊ Mini-Physical Interface Module (MINI-PIM) ပေါက်(1)ပေါက် ပါဝင်ပြီး 3G USB ပေါက်အတွက်လည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ Firewall Throughput – 850 Mps၊ Firewall+Routing PPS- 95 Kpps နှင့် IPSEC VPN Tunnels – 256 ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် (2200) နှုန်းဖြင့် Connections Per Second ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
10/100/1000 BASE-T အပေါက် (8)ပေါက် ပါဝင်ကာ USB 2.0 အပေါက် (2) ပေါက်နှင့် Mini-Physical Interface Module (MINI-PIM) အပေါက်(1)ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ Firewall Throughput – 950 Mpps၊ Firewall+Routing PPS- 125 Kpps နှင့် IPSEC VPN Tunnels – 512 ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် (2800) နှုန်းဖြင့် Connections Per Second ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
10/100/1000 BASE-T အပေါက် (4) ပေါက် ပါဝင်ကာ GPIM or multiple GPIM and XPIM combinations အပေါက် (8) ပေါက် ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ Firewall Throughput –7Gbps၊ Firewall+Routing PPS- 850 Kpps နှင့် IPSEC VPN Tunnels – 3000 ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင် (35000) နှုန်းဖြင့် Connections Per Second ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မော်ဒယ် SRX-210 HE2 အတွက် အမြင့်ဆုံး Security Policies – 512 ပါဝင်ကာ အခြား ထောက်ပံ့နိုင်သော Interface အမျိုးအစားများမှာ T1/E1, Serial, ADSL/2/2+, VDSL နှင့် G.SHDSL တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့နိုင်သည့် Routing Protocols များမှာ RIP v1/v2, OSPFv2/v3, IS-IS နှင့် BGP တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံး Security Policies – 2048 ပါဝင်ကာ အခြား ထောက်ပံ့နိုင်သော Interface အမျိုးအစားများမှာ T1/E1, Serial, ADSL/2/2+, VDSL , G.SHDSL နှင့် Ethernet SFP တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့နိုင်သည့် Routing Protocols များမှာ RIP v1/v2, OSPFv2/v3, IS-IS နှင့် BGP တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံး Security Policies – 8192 ပါဝင်ကာ အခြား ထောက်ပံ့နိုင်သော Interface အမျိုးအစားများမှာ T1/E1, Serial, DS3/E3 နှင့် Ethernet SFP တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့နိုင်သည့် Routing Protocols များမှာ RIP v1/v2, OSPFv2/v3, IS-IS နှင့် BGP တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Find Challanges? Join Us!
© 2019 Copyright by Frontiir. All rights reserved.